Yakavanzika Policy - hannari-shopu
Email kushambadzira: Nemvumo yako, tinogona kukutumira maemail nezvechitoro chedu, zvigadzirwa zvitsva, uye zvimwe zvinogadziridzwa.
Nokushandisa webhusaiti yedu, iwe (muenzi) unobvumidza kubvumira vanhu vatatu kuti vashandise IP yako, kuitira kuti vaone nzvimbo yako kuitira chinangwa chekushandurwa kwemari. Iwewo unobvumirana kuva nemari iyo yakachengetwa muchikwata chekugovera mu browser yako (yekuti cookie yenguva inobviswa zvayo kana iwe uvhara musikana wako). Tinoita izvi kuitira kuti sarudzo yakasarudzwa isarambe yakasarudzwa uye isingagumi kana uchitarisa webhusaiti yedu kuitira kuti mutengo uchinje kune (iwe mushanyi) mari yemunharaunda yako.
Kana tikakumbira ruzivo rwenyu rwechikonzero rwechikonzero chechipiri, sekutengesa, tinogona kukubvunza iwe zvakananga kubvumirano yako yakaratidza kana kukupa mukana wekuti kwete.
Kana mushure mekusarudza-kupinduka, ukachinja pfungwa, unogona kubvisa mvumo yako yekuti tisangane newe, kuitira kuunganidza kuenderera mberi, shandisa kana kuburitsa ruzivo rwako, chero nguva, nekutibata nesu kushanyawewebsite@hannari-shop.com .
Data yako yakachengetwa kuburikidza neCallify data yekuchengetedza, databases, uye yeBallify application. Vanochengetedza deta yako pane sevhavha yakachengeteka seri kwekudzivirira moto.
Kana iwe ukatipa nekodhi yako yekadhi yemarikiti, mashoko acho akavharidzirwa achishandiswa akachengeteka yakachengetedza teknolojia yepamusoro (SSL) uye akachengetwa neAES-256 kuvhara. Kunyange zvazvo pasina nzira yekutsvaga paIndaneti kana kuvhara kwemagetsi ndeye 100% yakachengeteka, tinotevera zvose zvePCI-DSS zvinodiwa uye tinoshandisa zvimwe zvinowanzogamuchirwa nemabhizimisi.
Kana iwe uchida: kuwana, kururamisa, kugadzirisa kana kudzima chero ruzivo rwevanhu isu nezve iwe, kunyoresa kunyunyuta, kana kungoda ruzivo rwakawanda bata neyekuvanzika Kwemutemo Kubvumirana Kwedu kuresourwebsite@hannari-shop.com